Naadiga Ac Milan Oo Dagsatay Qorshe Ay Xagaaga Ugu Dhaqaaqayso Saxiixa Edin Dzeko -
HomeciyaarahaNaadiga Ac Milan Oo Dagsatay Qorshe Ay Xagaaga Ugu Dhaqaaqayso Saxiixa Edin Dzeko
Naadiga Ac Milan Oo Dagsatay Qorshe Ay Xagaaga Ugu Dhaqaaqayso Saxiixa Edin Dzeko
February 21, 2018 F.G ciyaaraha 0
Naadiga AcMilan ayaa lagu soo waramayaa inay isku dayi doonto inay lasoo saxiixato weeraryahanka Roma Edin Dzeko xagaaga soo aadan iyagoo raadinaya gooldhaliye.
Sida laga soo xigtay Tuttosport, xiddiga garabka uga ciyaara Naadiga Borussia Dortmund Marco Reus ayaa weli ah riyada Ac Milan,laakiin Milan ayaa sidoo kale u baahan weeraryahan xilli ciyaareedkii dhaliya 15 ilaa 20 gool.
Dzeko ayaa ah xiddiga ugu cad-cad ee ugu horeeya liiska weeraryahanada ay doonayso xagaaga xilli weeraryahanada haatan ee Patrick Cutrone, Nikola Kalinic iyo Andre Silva ay kaliya dhaliyeen 9 gool dhamaantood.
Wargayska ayaa sheegaya in ay Naadiga Roma doonayso in ay xiddigo iibiso xagaaga si ay kooxda ugu xoojiso iyada oo xiddiga ku qiimaysa lacag dhan 25 milyan oo euro.
Kooxda Ac Milan ayaa lagu soo waramayaa in ay xiddiga diyaar ula tahay mushahar dhan 4.5 milyan euro sanadkii isaga oo noqon doona xiddiga 3-aad ee ugu mushaharka badan kooxda kana dambayn doona xiddigaha Gianluigi Donnarumma oo qaata 6 milyan sanadkii iyo daafaca Leonardo Bonucci oo qaata 8 milyan sanadkii.
Dzeko, oo si aad ah loola xiriirinayay Chelsea bishii lasoo dhaafay, ayaa dhaliyay 14 gool 32 kulan oo uu u saftay kooxda Giallorossi xilli ciyaareedkan.